Nipoaka Ny Hetsi-panoherana Any Brezila Satria Voamarina Ny Fampiatoana An’i Rousseff · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2016 5:31 GMT
Mpanao hetsi-panoherana mitazona takelaka milaza hoe “fifidianana mivantana izao” tao São Paulo. Aoriany, misy fiaran'ny polisy tsy laitram-bala roa vita Israeliana. SARY: Mídia Ninja, CC-BY-SA 2.0
Nifidy tamin'ny maro an'isa ny hanesorana an'i Dilma Rousseff eo amin'ny toerany ny Antenimieran-doholona Breziliana tamin'ny herinandro farany tamin'ny volana Aogositra, taorian'ny dingana naharitra taona iray momba ny fampiatoana ny filoha amin'ny toerany, izay nampikatso ilay firenena lehibe indrindra any Amerika Atsimo, nahatonga fisarantsarahana lalina teo amin'ny fiarahamoniny. Ho soloin'i Michel Temer i Rousseff mandritra ny ambin'ny fe-potoana tokony hitondràny, Michel izay mpifaninana taminy teo aloha, izay nanampy tamin'ny fitondràna ny hetsika fampiatoana azy.
Tanàna Breziliana maro tamin'ity herinandro ity no nisehoan'ireo hetsi-panoherana tsy manaiky ny fampiatoana an'i Rousseff. Nahitàna hetsi-panoherana isanandro tao São Paulo hatramin'ny Alatsinainy 29 Aogositra — nifanehatra mafy tamin'ny polisy moa ny ankamaroan'izy ireo — ny polisy izay nampiasa grenady mankarenin-tsofiny, entona mandatsa-dranomaso ary bala fingotra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny Alarobia 31 Aogositra, andro namaranana ny dingan'ny fampiatoana, ary nisian'ny hetsika lehibe indrindra ihany koa, nipitihan'ny baomba teny amin'ny tavany ny mpianatry ny anjerimanontolo, Débora Fabri, ary nijanona tany amin'ny hopitaly teo an-toerana ny alina. Nanoratra tao amin'ny pejy Facebook-ny izy avy eo fa nojambàna ny masony ilany havia.
Nomelohina ho nanodinkodina ny tetibola federaly i Rousseff mba hanafenana fitotonganana nihanahazo vàhana. Nandritra ny fiarovantenany, nanipika ny fahamarinany manokana izy ary ny tsy fidirany tamin'ireo sehatry ny kolikoly izay mandoto ireo politikan'ny firenena nandritra ny am-polo taonany maro. Iraika ambiny folo isan-jato amin'ireo Senatera 81 ao Brezila no nomelohana na nanaovana fanadihadiana momba ny kolikoly.
Taorian'ny nanaovany fianianana, niteny ho an'ny firenena tamin'ny seho tamin'ny fahitalavitra ny filoha vaovao, Michel Temer, ka nandritra izany, niantso ny firaisankinam-pirenena izy ary nanosika ireo niantso ilay dingana ho toy ny fanonganam-panjakana. Nolanian'i Temer sy ireo mpanohana azy ao amin'ny Antenimiera mpanao lalàna ireo fanovàna amin'ny tahirimbola ho an'ny fisotroan-drononon'i Brezila, sy ireo fanovàna amin'ireo seraseran'ny asa ary ny fampihenana ireo fandanian'ny governemanta, izay hisy fiantraikany amin'ny rafitra rehetra amin'ny fitandroana ny fahasalam-bahoakan'i Brezila.
Ny taona 2014, voafidy tamin'ny vato 51% i Rousseff, tao amin'ny sehatra iray nampanantena ny hanitatra ireo fandaharana ara-tsosialy, na nihemotra tamin'ny sasany tamin'ireo fampanantenàny aza izy tamin'ny taona 2015, nanova famindra tamin'ny fanitsiana ny tetibola ho lasa ambanimbany kokoa, izay nanena ireo tombotsoa amin'ny lafiny tolotra fiahiana ara-tsosialy.
Débora Fabri, 19 taona, voajamban'ny pitika vanjanà baomba nampiasain'ny polisy tamin'ny hetsi-panoherana ny masony havia, tany São Paulo ny 31 Aogositra. Sary: Mel Coelho/Mamana Foto Coletivo. Navoaka nahazoana alàlana.
Nihetsika ireo mpanao hetsi-panoherana, manohitra ny hitany ho tetikady ataon'ny kongresy difotra anaty kolikoly mba hanesorana ny filoha voafidy tamin'ny fomba demokratika, manao fanovàna malalaka araka izay tiany, ary manao izay hifikirana mafy amin'ny fahefana sy manajanona ireo fanadihadiana Lava-Jato momba ny kolikoly mahavoarohirohy azy ireo.
Na nanohana ireo fihetsiketsehana aza ireo hetsika ara-tsosialy izay nifandray ara-tantara tamin'ny Antokon'ny Mpiasa an'i Rousseff — toy ny Sendikà Foiben'ireo Mpiasa (CUT) ary ny Hetsik'ireo Mpiasa Tsy Manan-tany (MST), tsy hoe voatery mitaky ny hiverenan'i Rousseff akory ny ankamaroan'izy ireo. Eo ankilany, mitaky ny hanaovana ireo fifidianana solombavambahoaka vaovao izy ireo. Nanamarika ny fahavitsian'ireo saina sy takelaky ny Antokon'ny Mpiasa, tamin'ireo hetsik'iny herinandro iny ireo mpitatitra vaovaon'ny Global Voices izay nanatrika mivantana ireo hetsi-panoherana tany São Paulo, hetsika izay nokarakaraina tamin'ny alalan'ny media sosialy. Hita ho toa latsaky ny 25 taona ny ankamaroan'ireo nanatrika teo.
Voatifitry ny bala fingotra teo amin'ny vavany ilay mpaka sary Fernando Fernandes, ny Alakamisy, tany São Paulo. Sary: Mídia Ninja, CC-BY-SA 2.0
Nanomboka tao amin'ny Mozean'ny Kanto tao São Paulo (MASP) teo amin'ny Làlana Paulista, iray amin'ireo làlana fototra ao an-tanàna, ireo hetsi-panoherana. Misafidy ny toerana halehany ao an-tanàna ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny Talata sy ny Alarobia, nanandrana ny nandeha tany amin'ireo biraon'ny gazety an-tsoratra Folha de S. Paulo, izay hitan'izy ireo ho manohana ny fampiatoan an'i Rousseff, ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny Alakamisy, nanapaka hevitra ny handeha tany amin'ireo foiben'ny Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), ilay antoko politikan'ny filoha ankehitriny Michel Temer, izy ireo. Isanandro, aparitaky ny polisy mialoha ny ihazoan'izy ireo ny toerana nokendreny ireo mpanao hetsika, ary ny Zoma, tsy navela nanao ny diabe-ny mihitsy ny hetsika izay nokarakarain'ireo hetsiky ny mpiaro vehivavy mainty hoditra.
Niaro tena tamin'ireo fanafihan'ny polisy ireo mpanao fihetsiketsehana, tamin'ny fanamboarana fefy manaraka ireo làlana eny amin'izay tiany anaovana ny diabe, ary taminà hetsi-panoherana roa, nandroba banky vitsivitsy ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny 31 Aogositra, nisy namaky ihany koa ny fiaran'ny polisy izay nijanona teo amin'ny toerana Largo do Arouche ao São Paulo.
Nisafidy tamin'ny alàlan'ny tehaka izay làlana hanaovana ny diabe ireo mpanao hetsi-panoherana teo amin'ny Avenida Paulista. Sary: Mídia Ninja CC-BY-SA 2.0
Nandritra ny herinandro, nitazona olona maromaro nandritry ny fotoana voafetrany polisy, raha toa ireo maro hafa, toa an'ilay mpianatry ny anjerimanontolo, Débora Fabri, tena voaratra mafy. Araka ireo tatitra, ny 31 Aogositra, nisetrasetra mpaka sary roa ny polisy sady namotika ny iray tamin'ireo fakantsarin'izy ireo. Ny ampitson'iny, voatifitry ny bala fingotra indray ny mpakasary iray, Fernando Fernandes.
Ny lahatsary avy tamin'ny mpikatroka mafana fo Caio Castor, mampiseho polisy midaroka ireo mpanao fihetsiketsehana tao Avenida Nove de Julho, ny Alakamisy, tamin'ny nandehanan'ny hetsika nankany amin'ny ivon'ny tanàna.
Nahatonga hatezerana tao amin'ny media sosialy, ny matoan-dahatsoraka iray nitondra lohateny hoe “Fasista andalam-paharesena”, izay navoaka tamin'ny Folha de S. Paulo, ilay gazety an-tsoratra tsy miankina tery aloha ihany, izay eritreretina ho mpanohana ny fampiatoana an'i Rousseff, satria io niampanga ireo mpanao fihetsiketsehana sasany ho mihantsy ireo polisy ary manimba fanànam-bahoaka sy an'ny olon-tsotra. Nangatahan'ilay lahatsoratra ny mba hanasarahan'ny polisy ireo mpanao hetsika am-pilaminana sy mahery setra ary hanasaziany ity farany arak'izany, amin'ny fiantsoana azy ireo hoe “jiolahim-boto” sy “fasista”.
Nanoratra hoe “mpanao fanonganam-panjakana” teo amin'ireo varavaran'ny gazety an-tsoratra Folha de S. Paulo, ireo mpanao hetsi-panoherana. Sary: Mídia Ninja CC-BY-SA 2.0.
Tamin'ity herinandro ity, satria nikarakara hetsika lehibe ireo mpanao hetsi-panoherana, eritreretina hatao ny Alahady 4 Septambra eo amin'ny Avenida Paulista, namoaka naoty mandrara ny fanaovana hetsika, na inona na inona, ny governemantam-panjakana, satria ilay làlana ao anatin'ny làlan'ny afon'ireo Lalao Paralaimpika (Lalao Olaimpikan'ny olona manana fahasembanana ara-batana). Niteraka hatezerana lehibe tao amin'ny media sosialy io tany am-boalohany, fa taorian'ny fivoriana noelanelanin'ny ben'ny tanànan'i São Paulo, nanapaka hevitra ny hanome alàlana ireo mpanao fihetsiketsehana hanao ny hetsika ny governora, aorian'ny fandalovan'ny afo. Ao amin'ny Facebook, maherin'ny dimy alina ireo olona nanamafy ny hiatrehany na naneho ny fahavononany amin'io hetsika ny Alahady io.